10 Uhambo Lwemibhangqwana Elifunwa Kakhulu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Uhambo Lwemibhangqwana Elifunwa Kakhulu
Ezothando, kuyajabulisa, ngasogwini lwase-Italy, e-Alps yaseFrance ngaphandle komnyango, noma kwenye indawo eChina, lezi eziphezulu 10 ukufunwa kwabashadikazi kuzokumangaza.
1. Uhambo Lwezithandani Ezifunwa Kakhulu: I-Romantic City Break eParis
Ekukhuthazeleni ama-movie athandana kakhulu, IParis iyisimo sothando kakhulu sohambo lwezithandani zaseHollywood. Idolobha lezothando kakhulu, futhi enye yezindawo ezihanjwa kakhulu emhlabeni, isekhona futhi ihlala iyindawo efunwa kakhulu yimibhangqwana.
Uma unothando lwayo yonke into yesiFulentshi, patisserie, Izingadi zaseFrance, nezindlela ezihehayo, bese kuba ikhefu lomuzi eParis ikulungele. Ngaphezu kwalokho, uhambo lwezothando oluya eParis luyindawo efunwa kakhulu ngabashadikazi abathanda ukuqhuma, nokuphila la vie en rose.
2. Imibhangqwana Efunwa Kakhulu Iya E-Italy: Amalfi Coast
Ukudla, ukubukwa obumangalisayo, nolwandle, yenza ugu lwase-Amalfi lube enye yezindawo ezifuneka kakhulu ekuhambeni kwabashadikazi. Izindlu ezimibalabala emaweni, imigwaqo enamajika, nolwandle eceleni kwakho, konke okudingayo ngemibhangqwana etotobayo’ iholide.
Amalfi Coast iyi- 50 amakhilomitha ogwini lwezindlela ezincane ezibukekayo, amabhishi, nezindawo zokuhlala ezifihliwe ezinokubukwa okungenakulibaleka. Ungahamba ngesikebhe, noma ukugeza ilanga, ukupheka, noma ukudlela kwenye yezindawo zokudlela ezinhle zasolwandle. Izinketho ku-Amalfi Coast azipheli, ngisho nasemadolobheni amancane asogwini lwase-Italy, vele uthathe okukhethile!
3. I-Isle of Skye, Scotland
Ngamawa amahle, ukubukwa okuhle, namasiko athakazelisayo, IScotland ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. I-Isle of Skye ingesinye sezifunda ezinhle ngokumangalisayo eScotland, futhi uzodinga okungenani 2 amasonto ukujabulela ubuhle bawo obuningi.
Ukuthi ufuna ukuncoma umbono, noma uyithole ngezinyawo kokukodwa kwe- imizila eminingi yokuhamba izintaba, I-Isle of Skye iyisimangaliso semvelo. Ngokwesibonelo, uma ningabashadikazi abasha, lapho-ke uzothanda ukuthola ukwakheka kokuma komhlaba kwe Quiraing. Ngokolunye uhlangothi, ungaba nesikhathi esithile sothando echibini leFairy, noma ukuvakashela inqaba yaseDunvegan nensimu.
Ngamanye amazwi, i-Isle of Skye yindawo emangalisayo ohambweni lwezithandani, sibonga izindawo eziphakeme ezinhle zaseScotland, izigodi, nolwandle olumangalisayo. Lapha, ubungahamba nibambene ngezandla, umane ukujabulela adventure ndawonye.
4. Izithandani Ezifunwa Kakhulu Zokuhamba Izintaba ESwitzerland
Ngeziqongo ezineqhwa, amadlelo aluhlaza, nokubukwa okuhle okubukeka njengemidwebo, ISwitzerland iyindawo emangalisayo yokuya kwabashadikazi. Uhambo lwemibhangqwana ebifunwa kakhulu eSwitzerland yiZermatt, Izimpophoma zaseRhine, nesigodi saseLauterbrunnen. Uma nithanda ezamehlela ke Zermatt kuyinto ephelele ski ukuphela ngawe, futhi uma ufuna ukuphumula endaweni enhle, lapho-ke isigodi saseLauterbrunnen silungile.
ISwitzerland inemibhangqwana engapheli ehambela izindawo, ngakho-ke kuya ngezinhloso zakho zokuphunyuka kwezothando. Noma kunjalo, uzothola izindawo eziningi zothando, okwesikhathi sangemva komshado wesibili, noma ngoba nje ufuna ukwazisana, esenzakalweni esikhethekile. Ngakho-ke, it is really recommended to plan at least 7 uhambo losuku oluya eSwitzerland.
Ukudla okumnandi, umkhathi omangalisayo, nezindawo eziningi ezifihliwe zothando. Uhambo oluya eVenice luluhlu lwamabhakede azo zonke izithandani. Isibalo sabavakashi abaya eVenice minyaka yonke sigqamile, noma kunjalo, ubuhle bayo nobuhle bayokuthumba ngaso sonke isikhathi. Empeleni, kuhle kakhulu, ukuthi ngeke uze uqaphele wonke umuntu, futhi ube nesikhathi esimangalisayo ekubalekeni kwakho kwezothando.
Uhambo oluya eVenice lungenye ephezulu 5 imibhangqwana ebifunwa kakhulu ngoba ilungele impelasonto emfushane. Idolobha linezindawo eziningi zokubuka, Ukudla kwase-Italy, nezinketho ezinhle zokuhlala, ngakho-ke uzothola ipharadesi ku-gondola. Nokho, uma ufisa ukuphunyuka bese uthola amagugu ase-Italy azungeze i-Venice, ungaya kokukodwa kokuningi ukuhamba kosuku kusuka eVenice.
6. Imibhangqwana Efunwa Kakhulu Yokukhanyisa: Izintaba ZaseFrance
Ukugcoba kungenye yezindlela ezishisa kakhulu zokuhamba eYurophu, kuhlangene ne-Alps yaseFrance, futhi unemibhangqwana ethandana kakhulu’ uhambo. Lolu hlobo lwamatende luthanda kakhulu futhi lunethezekile kunamatende ayisisekelo. Setha imvelo zasendle futhi langa, ngemibono emangalisayo ye-Alps yaseFrance.
Ukugcwala ebungalow yakho yangasese, indlu ethokomele, ukuvuka kucula izinyoni, ukuphuza ikhofi, nokuhamba izintaba uqonde emnyango wendlu – ukuthandana kwezinganekwane. Lapho isidleke sakho sothando sihlome ngokuphelele, nasezindaweni ezinhle kakhulu, awudingi enye into ngeholide lezothando elingenakulibaleka.
7. Amsterdam: Iholide lokuphumula lezikebhe zasendlini
I-Amsterdam ingelinye lamadolobha amnandi eYurophu imibhangqwana, futhi ukuhlala endlini yesikebhe kungukuthandana kakhulu e-Amsterdam. Izikebhe ezindlini zingenye yezimpawu zase-Amsterdam, kumiswe eduze kwemisele. Nokho, uma usungenile, uzoyithola ithokomele kakhulu, obuseduze, futhi kuvikelwe ezixukwini ezibabaza le misele.
Ngaphandle kokungabaza, Ukudlidliza kwe-Amsterdam, Isibhakabhaka, isiko, nobuhle buhlaba umxhwele imibhangqwana evela kuwo wonke umhlaba. Ngaphezu kwalokho, ukubukwa kwedolobha nemifula, amathilomu ngaphandle kwewindi lakho, ukubaleka kwakho kwezothando kuzoba nokuphupha.
Izimakethe ezinkulu zokudla, iNotting Hill ebukekayo, Kensington Gardens, uhambo lwezithandani oluya eLondon luhambo olungenakulibaleka. Idolobha linikeza imisebenzi eminingi kakhulu, ngakho-ke ungacabanga ukuthi kungaphezu kokweqa ezothando.
Ngakho-ke, kufanelekile ukwenza ucwaningo oluncane, kusuka endaweni enhle kakhulu, nezinto ofuna ukuzenza ngempela. Ngamanye amazwi, hlanganisa uhlu lwezimakethe nezinto ezikhangayo ofuna ukuzivakashela. Ngaphezu kwalokho, shiya isikhathi esiningi sama-cocktails kwabaningi imigoqo yophahla. Ingqikithi yohambo ukubuyisa ezothando futhi kuqhume ndawonye.
9. Izithandani Ezifunwa Kakhulu E-Italy: Uhambo Lwewayini E-Tuscany
izivini, amagquma aluhlaza okotshani, futhi Ukudla kwase-Italy, uhambo oluya e-Italy inhlokodolobha yewayini kuhlu lwamabhakede abo bonke abathandanayo. Ukuhamba ngezivini, ukuphuza ewayinini lakho elibomvu, nokuzitika ngomkhathi onokuthula, ngokuqinisekile uzovuma ukuthi iTuscany izwakala ingcwele.
ngempela, I-Tuscany ingenye yemibhangqwana ephezulu ehambela izindawo njalo ngonyaka. Ukubukwa komlingo newayini kuthumba imibhangqwana evela emhlabeni wonke, okwenza babuye minyaka yonke.
10. Izithandani Ezifunwa Kakhulu EChina: UMfula iYulong
I-China iyindawo ekhangayo, noMfula iYulong ungenye yezindawo ezinhle kakhulu nezithakazelisayo. UMfula iYulong uyingxenye yoMfula iLi, yinde futhi ayipheli, ezungezwe amasimu aluhlaza, amadolobhana, namasimu elayisi. Ngakho, ukuya ku-adventure eduze noMfula i-Yulong kuyinto engummangaliso.
Ngaphezu kwe- ubuhle bemvelo, le UMfula iYulong likhaya lamadolobhana amaningi nabantu bezinhlanga. Ngakho, uzoba nethuba elingandile lokufunda ngendlela yokuphila endaweni yaseYangshuo, isiko, futhi art, njengoba bekulokhu kungamakhulu eminyaka.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele eyodwa yalezi 10 imibhangqwana ebifunwa kakhulu yitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Uhambo Oluyishumi Oluhamba Kakhulu Lwabashadikazi” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#romance imibhangqwana CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews